အရာအားလုံးရှိတဲ့သူ Geek ကိုဘာဝယ်ရမလဲ။ | Martech Zone
အရာအားလုံးရှိတဲ့သူ Geek ကိုဘာဝယ်ရမလဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
Valentine Day အတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ 'အမျိုးသမီးများ' အားလုံးကိုကဒ်တစ်ခုပို့လိုက်ပါတယ်။
ငါမျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူးငါအလုပ်မှလာသောအခါငါ့ကိုစောင့်ဆိုင်းငါ့စားပွဲခုံပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့စိတ်ကူးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ဂျိန်းဘာ့ဂ် (ကမ္ဘာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး Account Manager) ဒီလက်ဆောင်ကိုကြည့်ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်! ငါဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့တူအနံ့သွား ... hehe!
ဟုတ်တယ်အိုး…။ mmmmm ။ ပြီးတော့မွှေးကတကယ့်ကိုထူးဆန်းနေတယ်။ ဘယ်သူသိလဲ Trump - အမျိုးသားများအတွက်အမွှေးနံ့သာ - အရမ်းကောင်းတဲ့အနံ့ကိုခံလိုက်ရတယ်။ !
ခေတ်သစ် Web Development ၏ပညတ်တော်ဆယ်ပါး